क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करण र मोबाइल चेकआउटहरू वर्णन गरियो Martech Zone
क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करण र मोबाइल चेकआउट्स वर्णन गरियो
मंगलवार, मे 20, 2014 सोमवार, जुन 29, 2015 Douglas Karr
मोबाइल भुक्तानी सामान्य भइरहेको छ र ब्यापार छिटो बन्द गर्न र ग्राहकलाई भुक्तान प्रक्रिया सजिलो बनाउनको लागि ठोस रणनीति। तपाईं एक पूरा शपिंग कार्टको साथ एक ecommerce प्रदाता हो कि, एक मोबाइल चेकआउटको साथ व्यापारी (हाम्रो उदाहरण यहाँ छ), वा एक सेवा प्रदायक (हामी प्रयोग गर्दछौं फ्रेशबुकहरू सक्षम गरिएको भुक्तानीको साथ चलानीको लागि), मोबाइल भुक्तानहरू खरीद निर्णय र वास्तविक रूपान्तरण बीचको खाली अन्तर कम गर्न ठूलो रणनीति हो।
जब हामी पहिलो पटक साईन अप गर्छौं, हामी अप्ठेरोमा दगुर्दै थियौं कि उठ्न र चलाउनको लागि र सम्बन्धित सबै शुल्कहरू बुझ्न कत्ति गाह्रो थियो। त्यो केही वर्ष पहिले थियो ... अब सबै इन-वन समाधानहरू जस्तो ब्लुपे प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै छन् र क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्नेसँग सम्बन्धित शुल्कहरू। उनीहरूले यहाँ हाम्रा पाठकहरूको लागि केहि मार्गदर्शन प्रदान गरे।
कुनै पनि कम्पनी जसले क्रेडिट कार्ड स्वीकार गर्दछ क्रेडिट कार्ड प्रदायकहरू र भुक्तानी प्रशोधन प्रणालीहरूको लागि खरीद गरेर खर्च कम गर्ने अवसर छ। बजारमा त्यहाँ धेरै फरक-फरक विकल्पहरू छन्, प्रत्येक फरक सुविधाहरू र लागतहरूको साथ। एउटा खोज्नुहोस् जुन उच्च सुरक्षा, उच्च सुविधा, सस्तो दर, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसको प्रभावकारिता प्रस्ताव गर्दछ। भुक्तानी प्रोसेसरहरू मानमा भिन्न हुन्छन् जब यो एक अपरेशनको आकारको हुन्छ, भुक्तानीको मात्रा जुन तपाइँ प्रशोधन गर्दै हुनुहुन्छ र सम्भावित ग्राहकहरू बीच ब्रान्ड मान्यता निर्माण गर्ने तपाईंको क्षमता। एकचोटि तपाईंको भुक्तानी प्रशोधन प्रणालीहरू एक ठाउँमा भएपछि, तपाईंले चिन्ता लिनुपर्दैन - तपाईं आफ्नो उत्पादन र शिल्पमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। क्रिस्टन ग्रामिना, ब्लुपेको सीएमओ।
मोबाइल चेकआउट्स व्यापारीको मोबाइल उपकरण प्रयोग गरेर क्रेडिट कार्ड बिक्री जानकारी प्रसारण गर्न, कार्डलाई आधिकारिक पार्न, र एक रसिद पठाउन कार्य गर्दछ। प्रयोग गर्दै मोबाइल व्यापारी खाता, बिक्री इलेक्ट्रनिक रूपमा क्लियरिingहाउसमा सारिन्छ र विक्रेताले दुई वा तीन दिनमा उसको पैसा कमाउँछ। म्यानुअल क्रेडिट कार्ड स्लिपको साथ करीव करीव -०-दिन ढिलाइ समयावधिमा त्यो ठूलो सुधार हो। अफ-साइट विक्रेताहरूले सजिलै फिर्ती फिर्ता गर्न सक्दछन्। चार्ज सामान्यतया २'s घण्टा भित्र ग्राहकको कार्डबाट बाहिर आउँछ।
मोबाइल क्रेडिट कार्ड प्रशोधनले व्यवसायलाई बिक्री काउन्टरको पछाडिबाट बाहिर जान र उनीहरूको ग्राहकहरू कहाँ जान्छन् स्वतन्त्रता दिन्छ, चाहे यो काउन्टीको मेलामा हो, सडक उत्सवमा, फूड ट्रकमा वा तपाईंको पुरानो चेकआउटसँगै शोरूम पनि। विक्रेताहरूले क्रेडिट र डेबिट कार्डहरू स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता, उनीहरू जहाँसुकै भए पनि मुख्य सडक र अमेरिकीहरू किनमेल गर्ने तरीकालाई रूपान्तरण गर्दैछ।
भुक्तानी प्रवेश द्वार बनाम भुक्तान प्रोसेसर
भुक्तानी प्रकृया श्रृंखलामा भुक्तानी गेटवे र भुक्तानी प्रोसेसर दुई प्रमुख लिंकहरू हुन्। एक व्यवसाय मालिक को रूप मा, तपाई सायद यी सर्तहरु सुन्नुभयो र के फरक छ भनेर सोच्नुभयो। त्यहाँ प्रत्येक क्रेडिट कार्ड लेनदेनको साथ चार पार्टीहरू सामेल छन्:
प्राप्तकर्ता बैंक जसले व्यापारीको प्रक्रिया सेवाहरू प्रदान गर्दछ
जारीकर्ता बैंक जसले ग्राहकको क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड जारी गर्‍यो
भुक्तानी प्रोसेसर र भुक्तानी गेटवेको भूमिका फरक हुन्छ, यद्यपि प्रत्येक अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्नका लागि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटक हो।
एक भुक्तानी प्रोसेसर के हो? - तपाईंको व्यवसायमा क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्न, व्यापारीहरूले ब्लूपे जस्तो व्यापारी सेवा प्रदायकसँग एक खाता सेट अप गरे। भुक्तानी प्रोसेसर ले तपाईं, व्यापारी बीच डाटा प्रसारण गरेर लेनदेन कार्यान्वयन; जारी गर्ने बैंक (उदाहरणका लागि, तपाइँको ग्राहकको क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने बैंक); र प्राप्त बैंक (उदाहरणका लागि, तपाईंको बैंक)। एक भुक्तानी प्रोसेसर सामान्यतया क्रेडिट कार्ड मशीनहरू र अन्य उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईं क्रेडिट कार्ड भुक्तानहरू स्वीकार गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ।
एक भुक्तानी गेटवे के हो? - एक भुक्तान गेटवे सुरक्षित ई-वाणिज्य वेबसाइटहरु को लागी भुक्तान अधिकृत। यसलाई तपाईंको व्यवसायको लागि एक अनलाइन पोइन्ट अफ-सेल टर्मिनलको रूपमा सोच्नुहोस्। जब तपाईं व्यापारी खाताको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ, तपाईंको प्रदायकले भुक्तानी गेटवे प्रस्ताव गर्न वा दिन सक्दैन।
भुक्तानी प्रोसेसर बनाम भुक्तान गेटवे: मलाई कुन चाहिन्छ?
गेटवेको सबैभन्दा सामान्य प्रयोग भनेको इन्टरनेटमा एक इकमर्स स्टोर हो। यदि तपाईं ई-वाणिज्य व्यवसाय हुनुहुन्न भने, तपाईंलाई भुक्तानी गेटवे आवश्यक पर्दैन। आधारभूत व्यापारी खाता उत्तम हुन सक्छ। एक व्यापारी खाता खोज्नुहोस् जुन उचित भुक्तानी प्रशोधन दरहरू, २//24 ग्राहक सेवा, र PCI- अनुरूप (क्रेडिट कार्ड सुरक्षाको लागि मानक) प्रोसेसिंग छ।
अर्कोतर्फ, भुक्तानी गेटवे सायद तपाईंको भविष्यमा हुन सक्छ यदि तपाईं ई-वाणिज्य साइट छ वा योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने। सबै व्यापारी खाता प्रदायकहरूको भुक्तानी गेटवे छैन। केही प्रदायकहरूले तेस्रो-पक्ष भुक्तान गेटवे प्रयोग गर्दछ, जुन समस्या हुनसक्दछ जब तपाईंसँग विवाद छ। जब तपाईंसँग समस्या छ तपाईं कसलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ?
गेटवे र प्रशोधन शुल्क
एउटा कारण यो छ कि संगठनहरूले क्रेडिट कार्ड चन्दा प्रणालीको कार्यान्वयनलाई रोकिदिएका छ किनभने भ्रमित शुल्कहरू छन्। तपाईको टाउको यी सबै बिभिन्न शुल्कहरु लाई प्राप्त गर्न र तपाईको विशिष्ट संगठनको लागी उपयुक्त छ कि छैन निर्धारण गर्न गाह्रो हुन सक्छ। निम्नलिखित सूचीले क्रेडिट कार्ड शुल्कको सबैभन्दा सामान्य प्रकार समावेश गर्दछ।
व्यापारी खाता शुल्क - एक व्यापारी कुनै पनि व्यक्तिगत वा कम्पनी हो कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन प्रक्रिया। त्यस्तै, एक प्रसंस्करण खाता अक्सर एक व्यापारी खाता को रूप मा संदर्भित छ। सबै भुक्तानहरू यो वित्तीय खाता मार्फत गरिन्छ।
एक पटक शुल्क - धेरै व्यापारी खाताहरू केहि प्रकारको प्रारम्भिक सेटअप शुल्कको साथ आउँदछन्। यो शुल्क गेटवे सेटअप वा आवेदन शुल्कको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। केही कम्पनीहरूले लेनदेन प्रक्रियाको लागि प्रयोग गरिएको सफ्टवेयर वा अन्य उपकरणहरूको लागि पनि भुक्तान आवश्यक पर्दछ। के तपाइँ वेब आधारित प्रणाली प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँ तपाइँका उपकरणहरू भाडामा गर्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, तपाईंसँग प्रणाली वा उपकरणहरूको लागि एक पटक शुल्कको सट्टामा मासिक शुल्क हुन सक्छ।
मासिक खाता शुल्क - लगभग सबै व्यापारी खाता मासिक शुल्कको साथ आउँदछ। यो शुल्क खाता, कथन, वा रिपोर्ट शुल्कको रूपमा सन्दर्भ गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, मासिक शुल्कहरू $ १० देखि $ of० को दायरामा हुन्छन्। मासिक शुल्कको अतिरिक्त, केहि खाताहरूलाई मासिक न्यूनतम शुल्कको आवश्यक पर्दछ।
लेनदेन शुल्क र छुट दर - प्रत्येक लेनदेनमा अक्सर दुई प्रशोधन लागतहरू हुन्छन् ... एक आईटम शुल्क (सामान्यतया यो शुल्क $ ०.२० र $ ०.0.20० को दायरामा हुन्छ) र ए लेनदेन प्रतिशत। यो शुल्क एक को रूपमा संदर्भित छ छूट दर। छुट प्रोसेसरका लागि छुट दरहरू फरक फरक हुन्छन्, दुईदेखि चार प्रतिशतको दायरामा। क्रेडिट कार्डको प्रकार र प्रक्रिया विधि दुबै छुट छुट मा एक भूमिका खेल्छ। अधिकांश छुट शुल्क क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने कम्पनीमा जान्छ (उदाहरणका लागि भिसा, डिस्कभर)।
कार्ड र सेवाहरू तुलना गर्नमा कठिनाई
यो धेरै गाह्रो हुन सक्छ, यदि असम्भव छैन भने बिभिन्न कम्पनीहरूका लागि शुल्क तुलना गर्नु किनकि तिनीहरू मध्ये धेरैले आफ्ना शुल्कहरू साधारण ढाँचामा प्रस्तुत गर्दैनन्। म सोच्न थालेको छु कि धेरै जसो गेटवे र प्रोसेसरहरू उद्देश्यको लागि यो गर्छन्!
एक उदाहरण को रूप मा, कहिलेकाँही छुट छूट मा बिच्छेद गरीन्छ आदानप्रदान शुल्क र विभिन्न लेनदेन को प्रबन्धन को लागी शुल्क। लेनदेन शुल्कलाई असर गर्न सक्ने थप कारकहरू निम्न समावेश गर्दछ:
प्रयोग गरिएको कार्डको प्रकार (जस्तै क्रेडिट कार्ड बनाम डेबिट कार्ड)
लेनदेनको लागि प्रशोधन विधि (जस्तै बनाम स्वाइपमा कुञ्जी)
जालसाजी रोकथाम परीक्षणहरू (जस्तै उही ठेगान दुबै क्रेडिट कार्ड बिलि address ठेगाना र विशेष लेनदेनको लागि प्रयोग गरिन्छ?)
लेनदेनको सम्बन्धित जोखिम (जस्तै अधिकांश कम्पनीहरू विश्वास गर्दछन् कि भौतिक कार्ड स्वाइप बिना सम्पन्न भएको लेनदेनहरू बढी जोखिमपूर्ण छन्)
ब्लूपे एउटा हो सबै-मा-एक प्रदाता, तिनीहरूसँग आफ्नै भुक्तानी गेटवे छ जुन व्यापारी खातावालाहरूलाई उपलब्ध छ। ब्लूपे गेटवे एक स्वाइप रिडरको साथ खुद्रा वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्लुपे पनि धेरैमा एकीकृत गरिएको छ POS प्रणालीहरू र पिन डेबिट लेनदेन प्रक्रिया गर्न सक्छन्। सुरक्षित रूपमा एकीकृत भुक्तानीहरू प्रक्रिया गर्न भुक्तानी गेटवे प्रयोग गर्दा त्रुटिहरू कम गर्न सकिन्छ, लेनदेन प्रशोधनलाई गति प्रदान गर्न सकिन्छ, र मेलमिलापलाई सजिलो बनाउँदछ।
यदि तपाईं टर्मिनलमा लगानी गर्न चाहानुहुन्न, वा यदि तपाईंसँग ईकॉमर्स वेबसाइट छैन भने, तपाईं ब्लूपे गेटवेको भर्चुअल टर्मिनल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ लेनदेनहरू प्रशोधन गर्न यति लामो समय सम्म तपाईंसँग इन्टरनेट जडान छ।
NOTE: हामीलाई भुक्तान गरिएको थिएन, न त हामी ब्लुपे संग कुनै सम्बन्ध छ ... तिनीहरू यति राम्रो थिए कि हामीलाई यो ब्लग पोष्ट प्राप्त गर्न आवश्यक सबै जानकारीहरू प्रदान गर्न!
टैग: bluepayकार्ड स्वाइपक्रेडिट कार्डक्रेडिट कार्ड शुल्कक्रेडिट कार्ड प्रसंस्करणडेबिट कार्डठगी रोकथाममोबाइल चेकआउटहरूभुक्तानी गेटवे शुल्कPCIpci अनुपालनप्रशोधन शुल्कभर्चुअल टर्मिनल
मोबाइल पहिलो जब ग्राहकहरु लाई जोड्दै
यसले मलाई जान्न चाहने सबै कुरा वर्णन गर्दछ। उत्कृष्ट लेख!